Mobile Modedeenfr esptarshtrsqlnitfamabgswtaruamtiroAnagu yaanu nahaythemenintegrationsangeboteWaanada qof ba qofka kala u soo jeedinayohomeContact > Waxbarasho > Waxbarashada FarsamadaWaxbarashada Farsamada
Tababarada farsamaddu waxay dhalinyarada u horseedeysaa u na fureysaa xarumaha shaqooyinka kala duwan, waxay na xaqiijineysaa in loo soo saaro wadanka shaqaale aqoon leh oo bedela kuwa hawlgabay. Barashada farsamadu iyo xirfadaha kala duwani waxay si buuxda uga mid tahay nidaamka waxabarasho ee u degsan wadanka, waxa na loogu talo galay in ay ka haqabtirto wadanka shaqaale farsamoyaqaan ah oo xirfado kala duwan leh.
Wadankan Swiiska, dhalinyarada sadex meelood meel ayaa gala dugsiyada farsamada oo ay ku baranayaan xirfado kala duwan.
Haddii aad tahay farsamoyaqaan waayo arag ah, aadanse laheyn shahaado cadeyneysa aqoontaada xirfadeed, qodobka 17 naad ee sharciga waxbarasho ee Federaalka u degsan, oo ku saabsan waxbarashada farsamada , wuxu ku siinayaa fursan qaali ah oo aad ku raacdid tababar khaas oo kuu sahlaya in aad kasbatid shahaado farsamadeed oo caddeynaya heerka aqoontaada. Haddii aad tahay farsamoyaqaan muddo dheer soo shaqeyay, oo yaqaan xirfado kala duwan, ka faa’ideyso fursadan muhimka ah ee uu qodobka 17 naad kuu soo bandhigayo si aad u kasbatid shahaado ka tarjumeysa aqoontaada. Sahaadada aad ka qaadatid dugsiyada farsamadaha waxay kuu fureysaa albaabo badan, waxay na kaa dhigeysaa xirfadyaqaan loo baahanyahay.
In this section: themen/bildung/berufsbildung/berufsmatur, Tababarada , Ujiheynta dugsiyada caadiga ah iyo farsamooyinka, Udiyaarinta ardeyda farsamadaha, themen/bildung/berufsbildung/hoehere-berufsbildungRelated links:themen/arbeitthemen/auslaenderrechtthemen/asylrechtthemen/ehethemen/familiethemen/gesundheitthemen/integrationthemen/konsumthemen/sociale-sicherheitthemen/wohnenthemen/versicherungenthemen/steuernthemen/frauenthemen/alterthemen/verkehrthemen/religionthemen/auslaenderorganisationenthemen/sexualitaetLacagta iyo dhaqaalaha WaxbarashoAqoonsiga shahaadooyinkaBarashada luqadaha wadaniga ah ee Swiiska Dugsiyada derejada labaad IIDugsiyada heerka khsabka ahDugsiyada heerka xadaanada iyo qastiga laga leeyahayJaamacadaha iyo dugsiyada heerarka sar-sareMinxada iyo deeqda waxbarashoSida Swiiska loogu soo geli karo dow waxbarasho iyo kororsi aqooneedWaxbarashada FarsamadaWaxbarashada joogtada ah